Orange : mitohy ny ady amin’ny fanjakana | NewsMada
Orange : mitohy ny ady amin’ny fanjakana
Mitady ny fomba rehetra hanoherana ny fanjakana ! Mazava anefa ny lalàna araka ny rijantenin-dalàna laharana 2014-1352 ny 21 oktobra 2014, mamaritra fa ny backbone no ampiasain’ny mpandraharaha rehetra amin’ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Nampahatsiahy ny Orange Madagascar koa ny Antokon-draharaha mandrindra ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra (Artec) fa handoavana saram-pahazoan-dalana (licence) raikitra amin’ny fampiasana ny « fibre optique ». Tsy nety nandoa izany ity orinasa iray ity, ary nitory teny amin’ny Filankevi-panjakana, saingy tsy nahazo rariny. Mitady hampiakatra ny raharaha any amin’ny fitsarana iraisam-pirenena indray ny Orange Madagascar taty aoriana, araka ny resaka nataon’ny tale fampiroboroboana ny varotra (marketing) ao aminy, Laurent Giraud, tao amin’ny gazety Agence de presse de l’ocean Indien (APOI), ny 17 marsa teo, “tsy maintsy izay ny tohin’ny fifandirana eo amin’ny orinasa misy azy sy ny Artec”. Izany hoe, mitohy ny filàna ady ataon’ny Orange amin’ny fanjakana.
Nokianin’ity tale iray ity koa ny lafiny fifaninanana. Lazainy fa “mahatratra 10% ny faharetan’ny fahatapahana amin’ny backbone eto Madagasikara, ka tsy ekenay mihitsy”. Tsy nisy fanamarinana nomeny anefa.
Maningana ny Orange Madagascar
Mahavariana fa mankato ny fahefam-panjakana ny Orange any amin’ny firenen-kafa, toy ny atsy Afrika, ohatra. Saingy maningana ny Orange Madagascar, sahy manohitra ny Artec, toy ny tsy anekeny handoa ny saran’ny fahazoan-dalana (licence) amin’ny fampiasana ny “fibre optique”.
Nataon’ny orinasa reniny, Orange, mahoraka ny hanitarany ny fisiany aty Afrika, ny janoary 2016 teo, raha ny tatitra nataon-dRtoa Nafissatou Dia, talen’ny fifandraisana ivelany, faritra Afrika sy Moyen Orient (MEA). Izany hoe, lasa firenena 22 raha 19 tany aloha, niampy an’i Liberia, Sierra Leone ary Burkina Fasso. Nandoa volabe ity orinasa ity ahazoana ny fahazoan-dalana (licence), maherin’ny 100 miliara francs CFA tany Côte d’Ivoire, 152 tapitrsia euros (maherin’ny 547 miliara Ar) tany Tonizia, 22,8 tapitrisa euros (manodidina ny 82 miliara Ar) tany Cameroun. Hany maningana, manao di-doha tsy mety mandoa ny tokony haloany ny Orange Madagascar.